Yakanakisa 2019 Chinese Fekitori Pamusoro peGomo Ex-proof Mwenje weIne ngozi Nzvimbo Mugadziri uye Fekitori | Taiyi
Muenzaniso TY / TLED201 TY / TLED202
Ndeupi mutyairi wesistimu iyo mwenje wekuvhenekesa yenzvimbo dzine njodzi ine zvirinani dhizaini dhiraivha, iyo inogona kutyaira emhando yepamusoro marambi emwenje?
Kirasi I uye Kirasi II zvinotenderwa
Diki saizi, iyo nyowani dhizaini inoshandisa yazvino LED tekinoroji. Diki saizi, hupenyu hwakareba hwebasa uye kugona kwepamusoro.
Nyore kuisa-iyo simba chiteshi padivi inokutendera iwe waya pazvinenge zvichidikanwa. Tambo dzisati dzaiswa uye zvikorekedzo zvinoita kuti kuiswa kuve nyore. Ingo chinja mwenje uripo kana kuita nyowani nyowani. Iyo chigadzirwa inorema chete 8.52 mapaundi uye iri nyore kubata.
Kupenya, kunanga uye kusimba-120 degree mwenje inogadzira yakafara yunifomu mwenje. Ma 100,000 maLED anochengetedza dambudziko rekutsiva mababu-iyo aruminiyamu dzimba ine yepamusoro-tech kupisa singi inodzivirira iyo LED mutyairi. Zvirinani kupisa kupisa kunovimbisa hupenyu hwakareba hwe LED uye chengetedzo. Kuyera uye garandi yakanyorwa chengetedzo uye gore rimwe dombo-solid garandi.
Aya mwenje ndiwo achangoburwa eUS tekinoroji. Inofananidzwa neyakajairwa yakakwira bay mwenje, iwo madiki uye anoshanda zvakanyanya, anotaridzika zvirinani, anogara kwenguva refu uye ari nyore kuisa.
Tsiva iyo yekare Kirasi 1 uye Kirasi 2 neakakwira-anoshanda maOD. Chengetedza mari uye udzikise kuwanda kwebhubhu kutsiva nemaawa zviuru zana nemazana ezviero zvakatarwa maLED. Zvigadziriso zvakare zvakakosha kune zvimiro zvitsva. Chengetedza mari uye uvandudze mwenje.
Pashure: Square Alluminium Alloy kuputika chiratidzo mafashama mwenje
Zvadaro: Chengdu Taiyi IEC Chitupa Kuputika-chiratidzo LED Mwenje neIP67
Square Alluminium chiwanikwa kuputika chiratidzo mafashama l ...
Solar Powered Kwakaita Marine Navigation Aviation Ob ...